कस्तो बन्यो नयाँ धरहरा ? ७ तस्बिरमा हेर्नुहोस – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारकस्तो बन्यो नयाँ धरहरा ? ७ तस्बिरमा हेर्नुहोस
कस्तो बन्यो नयाँ धरहरा ? ७ तस्बिरमा हेर्नुहोस
पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको २२ तले धरहरामा बुधबार गजुर स्थापना गरिएको छ। पुरानै गजुर मर्मत गरी बाहिर सुनको जलप लगाएर धरहराको टुप्पोमा राखिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। गजुरसँगै २२ औँ तलामा शिवलिंग पनि प्रतिस्थापन गरिएको छ।
पुरानै शिवलिंगलाई प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सुशील ज्ञवालीले बुधबार बिहान ८ बजेको साइतमा विशेष पूजा गरेर प्रतिस्थापन गरेका हुन्। २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पमा भत्किएको धरहरा छ वर्षपछि पुनर्निर्माण सकिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख ११ गते धरहरा उद्घाटन गर्दैछन्।
सर्वसाधारणका लागि केही समयपछि मात्र खुला गरिनेछ। करिब ३ अर्ब ४८ करोड अनुमानित लागतमा निर्माणाधीन धरहरा निर्माण ठेक्का जिआइटीसी रमन जेभीले २०७५ असोज १४ गते पाएको थियो। डबल बेसमेन्टको धरहरा टावर, करिब ३ सय हाराहारी क्षमता भएको ट्रिपल बेसमेन्ट पार्किङ, भूकम्प संग्रहालय र क्याफेटेरिया गरी धरहरा निर्माणलाई चार भागमा विभाजन गरिएको छ।
भूकम्पले भत्काएको धरहराको भग्नावशेषलाई भने सिसाले छोपेर नयाँ धरहरा छेवैमा राखिएको छ। पुनर्निर्मित धरहराको कुल उचाइ ८० मिटर छ। यसलाई पुरानै संरचनामा निर्माण गरिएको हो। बीसौं तलाबाट काठमाडौंको दृश्यावलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
विसं १८८१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले महारानी ललित त्रिपुरासुन्दरीको सम्झनामा बनाउन लगाएको धरहरा १९९० को भूकम्पमा ढलेको थियो। सुरुमा ११ तला रहेको धरहरालाई १९९२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले ९ तलाको रहने गरी पुनर्निर्माण गराएका थिए।